Home Wararka Cabdikariin Guuleed oo u kala dab qaadaya FAHAD YASIN & RW...
[XOG] Cabdikariin Guuleed oo u kala dab qaadaya FAHAD YASIN & RW ROOBLE
Ilo wareedyo la hadlay MOL ayaa noo xaqiijiyay in madmadowga soo kala dhex galay Rooble iyo Villa Somalia uu salka ku hayo Doorashada 2021. Ilo wareedyada ayaa sheegaya kaddib markii uu soo saaray Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaah Farmaajo digreeto uu ku wiiqayo awoodda RW Rooble ayaa waxaa soo if baxay in uu jiro khilaaf soo kala dhex galay labada dhinac.
Rooble ayaa bishii hore xilka ka qaaday Cabdullaahi Kullane (Jiis), kaddib markii uu amray in garoonka diyaaradaha Muqdisho uu ka celiyo in uu ka dhoofo Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Macallimuu taasoo uu amar ku bixiyay Rooble in aan qofna laga celin karin in aay u kala socdaalaan dalka gudahiisa iyo dibaddiisaba.
Rooble ayaa xogta waxa aay sheegeysaa in uu damacsanaa kolkii hore in uu xilka ka qaado Agaasimaha NISA Fahad Yasin, balse uu ka codsaday saaxiibkiis Cabullaahi Carab in uu aanu ku degdegin xil ka qaadista Fahad.
Waxaa maalmahii la soo dhaafay soo baxayay in uu Rooble damacsan yahay in uu xilalka ka qaado Taliyayaasha Ciidamada taasoo uu Rooble doonayo in uu magacaaba saraakiil isaga toos uga amar qaata maadaam dhammaan afarta taliye ii ciidanka aay hadda si toos ah uga amar qaataan Villa Somalia oo ka dhexeyso is xulufeysi siyaasadeed.
Waxay arrinta cirka sii gashay kaddib markii uu Rooble ka helay casuumaad Madaxweynaha Kenya, taasoo Farmaajo iyo Fahad aay abaabuleen ciidan isla markaana aay xireen waddooyinka Muqdisho. Farmaajo ayaa aad uga careysnaa in Rooble uu heshiis la soo galo Kenya si loo furo ganacsiga keenida Qaadka ee Kenya iyo Somalia. Farmaajo ayaa reerkiisa hadda aay ku haystaan qandaraas Qaadka laga keeno Itoobiya
Cabdikarin Xuseen Guuleed oo ah musharax Madaxweyne ayaa bilaabay labadii habeen ee ugu danbeeysay in uu u kala dabqaado Rooble & Fahad Yasin, waxaana xogta aay sheegeysaa in uu Rooble ka ballan qaaday in aanu xilka ka qaadeyn Fahad Yasin isagoo tixgelinaayo codsiga Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Cabdikariin ayaa ahaa shaqsigii Fahad ka damiintay ka hor inta aanan laga dhigin Ra’isul Wasaaraha, waxaana Fahad ku qanciyay in uu RW ka dhigo Rooble saaxiibkiis Fahad Yasin sida la wada ogyahay.
Arrintan ayaa waxaa durbaba ka carooday saaxiibada Rooble iyagoo ku eedeynaya in Cabdikariin uu dabinkii labaad qoorta u geliyay RW Rooble.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin dheeri ah maalmaha soo socda.